Ogaden News Agency (ONA) – Khyaanada taliska Ethiopia oo dhicisoowday dhibaatana u keenay jiritaanka TPLF.
Khyaanada taliska Ethiopia oo dhicisoowday dhibaatana u keenay jiritaanka TPLF.
Maamulka Taliska Ethiopia ee gabalkiisii dhacay waxaa afkiisii laga gartay waxaan daggaal kula jirnaa Muslimiinta Ethiopia oo xag jir noqday. wadanka ayayna khatar ku yihiin. Ree galbeedku waxay u hiilinayaan ururada Argagaxisada ah sida ONLF. ONLF ayaa nagu diraysa beesha caalamka. haayadaha xuquuql insaanku ururka argagaxisada ah ee ONLF iyo kaadirkisa ayay wax ka dhageystaan. ONLF heshiis ayaan lagalaynaa iyo waxa aan xidhnay Jaraa idada kasoo baxa wadanka Ethiopia maadama ay qorayaan waxyaalo xag jir ah oo kasoo horjeeda shuruucda aan u dhignay Ethiopia.
Maalmihii lasoo dhaafay ayaa waxa wadanka Ethiopia ku habsaday isbadal siyaasadeed kadib markii kaligii taliye Zenawi laga waayay shaashadaha caalamka. waxaana sida la xaqiijiyay lasheegay in Zenawi uu dhintay ama uu howlgab yahay oo dib ugu soo laaban doonin siyaasada Ethiopia kadib markii laga helay xanuun dilaa ah. Arrintaas ayaa waxa ay keentay in taliskii gumeysiga ahaa ee gacanta birta ah ku hayay shucuubta Ethiopia ee gumaadka iyo xasuuqa ba’an ku hayay shacabka ayaa laftigiisii waxaa soo foodsaartay argagax iyo cabsi maadama oo dhiigyacabkoodi weynaa ee zenawi ahaa ninka kaliye ee ka taliya wadankaas.
Xanuunka Males Zenawi ayaa ahaa mid muddo dheer lasii oggaa, islamarkaasna lasii qorsheyay sidii looga gudbi lahaa. Balse qorshayaashi ay dajiyeen TPLF-tu waxay noqdeen kuwo dhicisoobay oo dhibaato (Backfire) ku keentay Taliska Ethiopia.
Qorshaha Ethiopia ka dhicisoobay maxuu yahay ?
1. Taliska Ethiopia waxa uu diyaariyay ruwayad cusub uu caalamka rabo innu ka gado isaga oo dhahaya mucaaradka Ugu weyn ee taliska Ethiopia ladaggaala waa ONLF. ONLF waxa aan u fidinayna qorshe wadahadal ah.
qorshahan ay wadanka ethiopia wadatay waxay rabtay inay si dhib yar ku dhameyso iyaga oo iskudayaayay in dad somali ah ay soo dirsato. markii howshaas ay ku guul dareysteen waxay bilaabeen hadana inay soo dirsadaan masuliyiin kamid ah maamulka wadanka Kenya. Taas ayaa markale suurtoobiweydey arintaas waxay usii bud dhigtay taliska TPLF oo moraal jabsan inay dani kukalifto qorshe aysan ku talo galin ay dabin ku galeen iyaga oo ku qasbanaaday in wadahadalka ay ka dhiggaan mid official ah oo wadanka Kenya dhex dhexaadiyo. Taas oo Ethiopia ay ka bariday wadanka Kenya in si Official ah dhex dhexaad uga noqoto wada hadalka ONLF iyo Ethiopia isla mar ahaantaasna uu kulankaas ka dhaco wadanka Kenya. Shuruudaha ONLF oo dhana ay buuxinayaan.
Ururka ONLF ayaa hadiyo jeer caalamka u sheegijiray hadafkiisa iyo mabaadi’da ururkana ay kamid ahayd waligoodna ku adkeysta in Ururka ONLF diyaar u yahay wadahadal innuu lagalo wadanka Ethiopia. Balse wadahadalkaas ayaa waxa ku xidhnaa shuruudo ay kamid tahay
in Wadan saddexaad uu ka dhacayo wadahadalku
In haayado calami ah goob joog ka noqdaan wadahalkaas si waxa ethiopia iyo ururka ONLF ay kuwada hadlaan u noqdo wada hadal caalami ah oo ka turjuma xeerarka UN-ta.
Ethiopia ayaa hadaba dabinkaas ku dhacday waxayna guul u tahay shacabka somalida Ogadeniya oo qadiyadoodu noqonayso mid lagaga wada hadlo heer caalami ah. Hadii Ethiopia ka baxdo wada hadalkaas waxa ay Jabhada ONLF helaysa sumcad iyo taagero ay si toos ah uga hesho beesha caalamka. Waxaana soo baxaysa waxyaabihi waligoodba lagu sheegi jiray gumeysiga Ethiopia.
Hadii wada hadalku dhaco, Waxa ethiopia ku qasbantahay inay oggolaato in shacabka Ogadeniya lagumeysto, sidaas awgeed gumeyste iyo lagumeyste ay wada hadlayaan. taasina waxay tilmaamaysa in afti laga qaado lagumeystaha iyada oo xeerarka caalamiga ah lagu dabaqayo. Waxa kale oo imanaysa in lagu qaado oo lamaxkamadeeyo dadka geystay xasuuqa mudada qarniga ah ka jiray Ogadeniya.
Qodobadan kore markii Ethiopia oggaatay Ethiopia waxay bilowday cabsi badan oo ay ka qabaan wadahadlka.
2. Taliska Ethiopia si waqtiga usii dheeraysto waxa uu soo saaray sharciyo cusub oo uu ugu magacdaray ladagalanka argagaxisada. Isaga oo ku xukumay dhamaanba mucaaradka iyo siyaasiyiinta Ethiopia iyo sidoo kale suxufiyiinta waxii ethiopia kajira sheega khaas ahaan wax ka qora taliska woyanaha inay yihiin Argagaxiso sidaas awgeedna xabsi daayimi ah lagu xukumo.
Waxa arrintaas keentay in dhamaanba qowmiyaadka gudaha Ethiopia laga daad gureeyo oo wax la xidho iyo wax fakada laga dhigo kadib markii Ururki doorashada lagalay TPLF ee Qinijit hadhaagisi Ginbot 7 lagu xukumay inay yihiin urur argagaxiso ah. Suxufiyiin badan oo ahaa dad si cadaalad ah wax uga qora siyaasada ethiopiana loo taxaabay xabsiga. iyada oo waliba haayadaha Xuquuql Insaanka Iyo kuwa samafalkaba laga mamnuucay wadanka Ethiopia si aysan uga waramin waxa ka jira gudaha Ethiopia.
Gumeysiga ayaa arrintan ugu talo galay in marka Zenawi hawada ka baxo, uu wadanku ahaado wadan caalamka laga qariyay. balse arrintan waxay keentay durbaan kale oo ay isku kiciyeen taliska TPLF. Waxaana durbaan weyn caalamka la dhex maray haayadaha Xuquuql Insaanka iyo kuwa UN-ta oo meelkasta ka sheegaya dhibatada ka jirta Ethiopia gudaheeda. Saxaafadi caalamka ayaa iyana heshay warar badan ay ka qoraan Ethiopia oo liddi ku ah gumeysiga Woyanaha.
3. TPLF waxa kale oo ay qorsheysay in muslimiinta Ethiopia iska horkeento oo iyaga ukala qeybiso 2 qeybood -qeyb taagersan Al Xabasha oo mad-hab cusub ah iyo Muslimiinta kale Ethiopia.
Arrintan ayaa iyana waxay noqotay Miino dib ugu qaraxday iyagii sameeyay kadib markii muslimiinta ethiopia gacmaha isqabsadeen oo ay ka hortageen taliska TPLF. eegana Banaanbaxyo waaweyn ay ka dhacayaan dariiqyada Addis ababa iyo guud ahaan ethiopia oo dhan.
4. TPLF ayaa sii qorsheysay ilo dhaqaale oo ay howshan ku maamusho, ilo kaabe dhaqaale oo cusub hirgalisay oo ay lacag ku aruursadaan. Waxayna dhulka Ethiopia ka dhiggeen dhul ay iibsadaan oo Dhul beereed shirkado shisheeye kaga gataan lacag badan.
sido kale waxay dadka Ethiopia ka aruursadeen lacago ay sheegeen inay kudhisayaan biyo xidheeno aan waxba ka jirin oo ay ogyihiin inaan la dhameys tiri karin. Qorshahan ayaa ah mid hadii ay guul dareystaan oo taliska Woyanuhu dhaco- lacagihi ay lafakan lahaayeen madadxa tigreegu.
Arintan ayaa iyana dib uguqaraxday kadib markii wadamada ree galbeedka ee dhaqalaha adag siinayay hubka iyo saanada siyaasadeed ayaa kala noqdey taageradi taliska TPLF. kadib markii qowmiyadaha “Indegenouse”-ka ah ay isir tir kusameyeen.
Iskusoo duubo wasaarada Arrimaha Dibada ee taliska Woyanaha oo meel ay miciinsato la’ ayaa laga af gartay ONLF waan la heshiinaya oo hubkay dhigayaan islawarqadaas waxay ku sheegeen in ururuka ONLF uu yahay argagaxiso caalamakana uu ururkan ONLF ku dirayo oo hayadaha xuquuql insaanku ururkan argagaxisada ah kaliya waxka dhageystaan. ruwayada cusub ee TPLF jilayso oo horey loogu baran ayaa ah Baroortu orgiga ka weyn. Dowlad Christian ah ayaan ahay oo Islaam ku weegaarsan yahay, Muslimiinbaa isoo weeraraysa iyo turafadi TPLF waa soo dhamaatay.
Dabinadii ay Ethiopia soo maleegaysay ayaa iyadii dib ugu noqday, taas ayaa marka waxay keentay in Ethiopia gal-galato. Iyada oo xaalada TPLF mareyso Nin Qoyan Biyo Iskama ilaasho. ama maah maahdi aheyd Neef gowracani Geedo kama gudo.
ONLF waxay sheegtay in aysan hubka dhigayn’ inta shacabka Ogadeniya xuquuqdisu maqantahay xoriyada aaya ka tashigoodana ay ka helayaan oo ah mid ay iyagu u madax banaanyihiin.